I-apostrophe yinto yokuthetha apho umntu ongakhoyo okanye ongakhoyo okanye into ejongene nayo isetyenziswe njengokuba ikhona kwaye inakho ukuqonda. Eyaziwa nangokuthi i-turne tale, aversio, kunye ne-aversion, ama-apostrophes ngamagama amanqaku amaninzi atholakala kwiingqungquthela ngaphezu kweprose .
I-apostrophe yindlela yokwenziwa komntu ukuba isicatshulwa uBrendan McGuigan sichaza kwi "Devices Devices" njengesixhobo "esinamandla, sengqondo" esona sisetyenziswa ngokukhethekileyo "ekubhaliweyo nokubhala iincwadana ezithembekileyo ezixhomekeke kakhulu kumandla omzimba." Nangona kunjalo, uMcGuigan uyaqhubeka athi "kwiingqinisiso ezisemthethweni nezolwazi, ukusebenzisa i-apostrophe inokubonakala ibinomculo kwaye iphazamise."
Ukubonelela umxholo othile, ungaboni ngaphezu kombongo odumileyo nguJane Taylor uguqule isingeniso sosuku lwe-nursery day "I-Star," ebhaliwe ngo-1806, ebiza emzimbeni wasezulwini wenkwenkwezi ethi "Ukukhwankqisa, ukuphosa, inkwenkwezi encinci , / Ndingazibuza ukuba ungubani. " Kule meko, u-apostrophe uthetha ngokuthe ngqo kwenkwenkwezi engaphiliyo "phezulu phezulu kwehlabathi ephakamileyo," ukuyenza umntu kwaye ucamngce indlela esenza ngayo.
Ukubaluleka kwama-Apostrophe kwiingqungquthela kunye neProse
Njengahlobo lwedilesi ngqo kwizinto ezingapheliyo, ama-apostrophes aqhubela phambili imifanekiso yeenkondlo kwaye ihlala igxininisa ubunzima beemvakalelo kwilizwe lethu lemihla ngemihla. Akunakudideka kunye nomqondiso wokubhala okubizwa ngokuba ngu-apostrophe , inkolelo yentetho inomsebenzi obalulekileyo kuwo wonke umntu ovela kwimisebenzi kaMary Shelley eya ku-Simon & Garfunkel eyabetha "Sming Silence".
Ngokwezigaba, ama-apostrophes afana nesiNgesi njengengxenye yentsapho ekhohlakeleyo kunye ne-aporia - isimboli yentetho apho isithethi sibonisa ukungathandabuzeki okwenene okanye okucacileyo ngesihloko-apho isithethi sompostile siqonda ukuba esi sihloko asikwazi ukuwaqonda ngokwenene amagama kodwa endaweni yoko wasebenzisa intetho ukugxininisa yakhe inkcazo yaloo nto.
Nangona ininzi isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwisicatshulwa esithethiweyo, ama-apostrophes nawo angadlala kwiifom ezibhaliweyo, enjalo kumzekelo odumileyo wesigaretti esineenkcukacha ezibhekiselele kubaphulaphuli abancinci kwi-ad - abangazange bathenge umkhiqizo-ukuba babhenele abaphulaphuli abanqwenela ukuphinde bavelele "intsha" yesiganeko umthengisi we-cigarette wayezama ukuthengisa.
Imizekelo engakumbi kwiNkcubeko yePapa
Ngexesha elizayo xa ubukela umboniso wakho we-TV oyintandokazi, thabatha umzuzu ukubona ukuba ungayibona nayiphi na indlela yokusebenzisa i-apostrophes kubalinganiswa-unokutshatyalaliswa ukuba kulandelwa kangakanani le ndlela yokuthetha ukusiza abadlali ukuba bathumele imiyalezo yabo kubaphulaphuli .
Ngaphambi kwamaxesha amaGrisi xa uHomer ebhala "i-Odyssey," ama-apostrophes asetyenziswe njengezixhobo zokubhala ukuba ahlule ukuthetha nabameli bokuqala ukuba bathethe inxalenye yesithathu, kunye nomlandeli ongenamntu ngokuthe xaxa uchitha ulwaphulo lwesithathu aze azise abaphulaphuli befowuni yesicatshulwa esithile abaye baphosa.
Ngexesha langoku, iikholeji zethelevishini -i-comedies-ngokuqhelekileyo isebenzisa le mpawu ukuba ibizele abaphulaphuli babo. Leyo yimeko xa abalinganiswa kwi-"Battlestar Galactica" bebiza "i-Frakking toasters" nantoni na into engaphumelekanga kwinqanawa yendawo, kunye neendlwana kwiimbuzo ziyi-Cylone ze-humanoid ezinomgomo wokutshabalalisa uluntu oluseleyo.
Indlela yokuLawula kunye nokuchonga i-Pin Oak
Iingoma ezi-40 eziphezulu zeR REM
USanta Nick eFransi - iNdaba eFrentshi elula ngokuguqulelwa kweNgesi
ImiSebenzi eyiMisebenzi eSebenzayo ngaphambi kokubuyisela ikhaya lakho
Impilo Yoluntu Ngethuba Lokuguqulwa Kwezoshishino